တရုတ်, စိတ်ကြိုက်, အရည်အသွေးတူတူ, စျေး, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ - Shenzhen Ritter Star Technology Co. , LTD
နေအိမ် >ထုတ်ကုန်များ >Tutu
အပြာ pancake Tutu
Blue Pancake Tutus ရောင်းရန်၏ဒီဇိုင်းမှာ "Treasure" နှင့်တူသည်။ အလင်း၏အလင်းအောက်တွင်ပိုမိုရောင်စုံ; ပေါင်းစပ်ဇာထည်, ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုမိုအလွှာ, လှပသောနှင့်မြင့်မြတ်သောကြည့်ရှုအောင်; Hidden back buckle, back buckle နှင့် body အရောင်များကိုပေါင်းစပ်။ ပိုမိုစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိခြင်း၊ Gradient အရောင်ဒီဇိုင်း! ပို၍ နူးညံ့။ အပေါများသည့်အရောင်များ၊
ခရမ်းရောင် pancake Tutu
Purple Pancake Tutu ၏ဒီဇိုင်းသည်“ Bauhinia Starlight နှင့် Galaxy” မှလာသည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည်မှာ - Rich rhinestones! အလင်း၏အလင်းအောက်တွင်ပိုမိုရောင်စုံ; Hidden back buckle, back buckle နှင့် body အရောင်များကိုပေါင်းစပ်။ ပိုမိုစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိခြင်း၊ Gradient အရောင်ဒီဇိုင်း! ပို၍ နူးညံ့။ အပေါများသည့်အရောင်များ၊
Ballerina Pink Tutus ရောင်းရန်၏ဒီဇိုင်းမှာ "Treasure" နှင့်တူသည်။ ၎င်းတွင် - ကြွယ်ဝသောကျောက်ဆောင်များပါ ၀ င်သည်။ အလင်း၏အလင်းအောက်တွင်ပိုမိုရောင်စုံ; ပေါင်းစပ်ဇာထည်, ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုမိုအလွှာ, လှပသောနှင့်မြင့်မြတ်သောကြည့်ရှုအောင်; Hidden back buckle, back buckle နှင့် body အရောင်များကိုပေါင်းစပ်။ ပိုမိုစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိခြင်း၊ Gradient အရောင်ဒီဇိုင်း! ပို၍ နူးညံ့။ အပေါများသည့်အရောင်များ၊
အဝါရောင် pancake Tutu
ရောင်းရန်အဝါရောင်ပန်ကိတ် Tutus ၏ဒီဇိုင်းမှာ "Peach velvet" နှင့်တူသည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည်: Hidden back backle၊ back buckle နှင့် body အရောင်ရောစပ်ခြင်းတစ်ခု၊ Gradient အရောင်ဒီဇိုင်း! ပို၍ နူးညံ့။ အပေါများသည့်အရောင်များ၊
Adult Ballerina Tutu ၏ဒီဇိုင်းလှုံ့ဆော်မှုသည်“ Acacia” မှလာသည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည်။ Rich rhinestones! အလင်း၏အလင်းအောက်တွင်ပိုမိုရောင်စုံ; ပေါင်းစပ်ဇာထည်, ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုမိုအလွှာ, လှပသောနှင့်မြင့်မြတ်သောကြည့်ရှုအောင်; Hidden back buckle, back buckle နှင့် body အရောင်များကိုပေါင်းစပ်။ ပိုမိုစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိခြင်း၊ Gradient အရောင်ဒီဇိုင်း! ပို၍ နူးညံ့။ အပေါများသည့်အရောင်များ၊
ဘဲလေးလင်ပန်း Tutu ဝတ်စုံ
Ballet Platter Tutu Costumess ရောင်းရန်အတွက်ဒီဇိုင်းသည် "Crown" နှင့်တူသည်။ အလင်း၏အလင်းအောက်တွင်ပိုမိုရောင်စုံ; Hidden back buckle, back buckle နှင့် body အရောင်များကိုပေါင်းစပ်။ ပို၍ စည်းလုံးညီညွတ်။ ကျွမ်းကျင်စေသည်။